ခုတလောမှာ ၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းကတော်တော်လေး ကျော်ကြားနေတော့ ပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေအများစုက ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ အတွက်ရော အဖွဲ့အစည်းအတွက်ရော ကြိုတင်စီမံထားပေမည့် အသင့်အနေအထားမရှိတာများပါတယ်။ ကွဲပြားစေချင်တယ်နော် Planned နဲ့ Prepared ကို ခု Corona virus ပဲကြည့်….. ကူးစက်မြန်ပြင်းထန်ဆိုတာ သူ့တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူး နိုင်ငံမှာလည်း ဒါမျိုးဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုတော့ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ Plan နဲ့ Protocol ရှိပါတယ်။
ခက်တာက စာအုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်နေတာ။ Preparedness ရှိအောင် အသင့်အနေအထားရောက်အောင် လုပ်နေတဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့ လေ့လာနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းရှားတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ သိရသလောက် သေသေချာချာ prepare လုပ်နေတာ မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တော့ ရှိတယ်။ စစ်တပ်ဆိုရင်လည်း Military Preparedness ရှိနေအောင် စစ်ရေးလေ့ကျင့်တာတွေ စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ရပါတယ်။
Plan လုပ်တယ်ဆိုတာ ကြိုတင်စီမံချက်ချထားတာပဲရှိတယ် လေ့ကျင့်ရေး အပိုင်းတွေ သင်ယူမှုအပိုင်းတွေမပါဘူး Plan ဆိုတာ တစ်ချိန်လုံး လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး Prepare ကမှ တကယ်ကို ဖြစ်လာမည့် အရာအတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ပွဲမဝင်ခင် အပြင်ကကျင်းပနေတာဖြစ်တယ်။ တချို့ကိစ္စတွေက အထိခိုက်မခံတဲ့ အရာတွေဖြစ်လို့ ဒီနေ့မှာတော့ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ကို ဘယ်လို Plan မလည်း ဘယ်လို Prepare လုပ်မလည်း ဆိုတာပြောပြချင်တယ်။
ဘာမှမပြောခင် ရှင်းပြချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ယနေ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ အလုပ်လုပ်မယ်ဆို ဘာအာမခံချက် ရှိသလည်းဆိုတာပါ။ ဒီနိုင်ငံမှာ International Companies တွေရော Local Companies တွေရော မှာ Pension ပေးတဲ့ programe မရှိတာများပါတယ်။ Insurance တော့ထားပေးကြတာကိုတွေ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မညှာမတာ ပြန်မေးပါ။ ‘’အကယ်လို့များ ဒီနေ့ မတော်တဆ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်’’ ‘’အကယ်လို့များ ဒီနေ့မှာ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရင် ‘’ ‘’အကယ်လို့များ ဒီနေ့မှာ ကိုယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့ Skill set က အရေးပါတဲ့ Skill Set မဟုတ်တော့ရင်’’ သင်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလည်း? ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလည်းဆိုတာထက် အသင့်အနေအထားရှိလား? လူတိုင်းကတော့ ကြားကောင်းရုံလောက် Life long planning၊ Career Planning ဆိုပြီး စာရွက်ပေါ်တင် စီစဉ်ထားကြတာပဲ။ တစ်ခုပဲ……. အဲ့ဒီ Plan ထဲမှာ ပါတဲ့ ဘယ်နှစ်ခုလောက်ကို Prepare လုပ်နေသလည်း?
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို နမူနာထားပြီးပေးပါမယ် သူက Marketing Manager၊ service industry တစ်ခုမှာ လုပ်နေတာကြာပြီ Channel Management တွေ Advertising တွေ Sales နဲ့ ပတ်သက်တာတွေပါ နားလည် တတ်ကျွမ်းတယ်။ ဘ၀ကြီးကသာယာဖြောင့်ဖြူးနေတာပေါ့ သူ့ Plan အရဆိုရင်တော့ နောင်မကြာခင်မှာ ရာထူးတိုးဖို့ ပဲရှိတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ Company ကအခြေအနေအရ မြန်မာပြည်ကနေခွာတော့မယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။ ဒီမှာ သူတစ်ယောက်ပြာယာခတ်ကုန်တယ်။
အလုပ်အသစ်ကို ကြိုးစားရှာဖွေရတယ်။ အဲ့လိုရှာတဲ့ အချိန်မှ သိလိုက်တာ က သူနဲ့ အပြိုင်လျှောက်ထားသူတွေထဲ မှာ သူနဲ့ လုပ်သက်တူပြီး တခြား Skill Set တွေရှိနေသူတွေကို အပုံအပင်တွေ့ရတော့တာပဲ။ သူ့မှာ Digital channel ကို နားမလည်ဘူး၊ အခင်းအကျင်းပြောင်းလာတဲ့ အတွက် ဗျူဟာ အသစ်တွေကို သုံးနေကြပြီဆိုတာကို ရုတ်တရက်လိုက်မမှီဘူး ဒီတော့ ရှိတဲ့ စုထားတဲ့ ပိုက်ဆံလေးကိုထိုင်ကြည့်ပြီး အလုပ်လေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်တယ်။ Business ဆိုတာ သူထင်ထားသလောက် Marketing လေးတတ်ကျွမ်းရုံနဲ့ မပြီးဘူးဆိုတာကို သိလာတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ Talent တွေကရှား၊ ကုန်ကြမ်းကစျေးကြီး၊ financial knowledge ကလည်း အရင်ကတည်းကမလိုက်စားခဲ့တော့ ခုမှ ပြန်သင်ရမလိုတွေဖြစ်ကုန်ရော။ အဲ့တော့ အဲ့ဒီအလုပ်ကလေးဟာလည်း စောစောစီးစီး ပိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့ အခြေအနေတွေရောက်လာတာပေါ့။ ဒီနမူနာလေးမှာ သင်ခန်းစာယူစေချင်တာက Skill ဆိုတာ ပညာရပ်ဆို တာ သင်တန်းတွေတက်နေရုံနဲ့ ပြည့်လာတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူး ခက်တာက အများစုက Marketing သင်တန်း’’တက်’’ပြီးတယ်လို့ပြောတဲ့သူများသလောက် Marketing ‘’တတ်’’တယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့သူရှားတယ်။
တက်ရောက်ပြီးမြောက်တာကို သင်ယူတတ်မြောက် အသုံးချတာနဲ့ လွဲနေတုန်းပဲ တည်ဆောက်ယူရတဲ့ အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်ရမယ် Preparedness ဖြစ်နေဖို့ အတွက် Resources တွေကိုအသုံးချရမယ် အသင့်အနေအထားရှိဖို့ ဘာလုပ်မလည်း? သင့် Plan ကဘာလည်း? ဒီပေါ်မူတည်ပြီး ၁. အချိန် ၂. ငွေကြေး ၃. စိတ်ခွန်အား ၄. မိတ်ဆွေ ရှိတာတွေကို အကုန် အသုံးချပြီး လေ့လာရမယ်၊ ပြင်ဆင်ရမယ်။ မနက်ဖြန်ဆိုတာ ကြိုမမြင်ရဘူး။ ပြင်ဆင်ရုံနဲ့ လုံလောက်တဲ့ အနာဂတ်ကိုလည်း မဖန်တီးနိုင်ဘူး။ လက်တွေ့ အကောင်းဆုံးကတော့ သင့် Plan ရှိတယ်ဆိုရင် Plan ထဲကအနေအထားတစ်ခုထိတော့ အသင့်အနေအထားရောက်အောင် အားထုတ်ထားသင့်ပါတယ် လို့ အကြံပေးပါရစေ။